Imbali yeeWatch Clocks
Clocks Mechanical - Pendulum ne Quartz
Ngexesha elininzi leMinyaka Ephakathi, ukusuka kuma-500 ukuya ku-1500 AD, ukuqhubela phambili kwezobuchwepheshe bekuseYurophu. Izitayela ze-Sundial zashintsha, kodwa abazange basuke kwiimigaqo yakudala yaseYiputa.
Izilwanyana ezilula ezibekwa ngaphaya kweminyango zazisetyenziselwa ukuchonga emini nasemini "emanzini" omhla wokukhanya kwelanga kwi-Middle Ages. Zininzi iintlobo zee-pocket sundials ezazisetyenziswa ngekhulu le-10-enye imodeli yesiNgesi ekhethiweyo kwaye ihlawuliswe ukuguqulwa kwexesha lokuphakama kwelanga.
Kwiminyaka yokuqala ukuya kwele-14 leminyaka, amawashi amakhulu amakhulu aqala ukuvela kwiinqaba zedolophu eziliqela zaseItali. Ayikho irekhodi nayiphi na imizekelo yokusebenza ehamba phambili kweziveki zikawonkewonke ezithintekayo kwaye zilawulwa yindlela yokuphepha. Iinkqubo ze-Verge-foliot zalawula iminyaka engaphezu kwama-300 ngokuhlukahluka kwimilo ye-foliot, kodwa bonke babe neengxaki ezifanayo ezisisiseko: Ixesha lokuchithwa kwamanzi lixhomekeke kakhulu kwimali yokuqhubela phambili kunye nenani lokungqubuzana kwi-drive. iyanzima ukulawula.
Olunye uphuhliso lwalusungulwa nguPeter Henlein, umkhonto waseJamani waseNuremberg, ngexesha elithile phakathi kwe-1500 no-1510. UHenlein wadala iwashi ezenziwe ngeentsuku. Ukutshintshwa kwezixhobo ezinzima zokuqhuba ukuqhubela phambili kubangele amawashi amancinci nangaphezulu kunye namawashi. U-Henlein wabiza amaxesha akhe "amaYukreya aseNuremberg."
Nangona bephuculwa njengokuba i-minspring engabonakaliyo, yayithandwa kubantu abacebile ngenxa yobukhulu bayo kwaye ngenxa yokuba babekwa kwikhefu okanye itafile endaweni yokuxhoma eludongeni.
Yayiyimizila yokuqala ephathekayo, kodwa yayineeyure kuphela. Izandla ezincinci azizange zibonwe ngowe-1670, kwaye iiwashi zazingenalo ukukhusela iilazi ngeli xesha. I-Glass efakwe phezu kobuso be-watch ayizange ifike ngexa le-17 leminyaka. Sekunjalo, intuthuko kaHenlein ekuyileni yayiyimphambili yokugcina ixesha elichanekileyo.
Ixesha leMechanical Clocks
U-Christian Huygens, ososayensi waseDutch, wenza iwashi yokuqala ye-pendulum ngo-1656. Yayilawulwa yindlela ekhoyo "yendalo" yokuchithwa. Nangona u- Galileo Galilei ngamanye amaxesha uvakaliswa ngokuqulunqa i-pendulum kwaye wafunda isisombululo sakhe ngowe-1582, ukwakhiwa kwakhe kwewashi kwakungakhiwa ngaphambi kokufa kwakhe. Iwashi ye-Huygens ye-pendulum yayinephutha elingaphantsi komzuzu omnye ngosuku, okokuqala ukuchaneka okunjalo kuphunyeziwe. Ukuphuculwa kwakhe kwangaphambili kwanciphisa iziphoso zewashi zakhe ngaphantsi kwemizuzwana engama-10 ngosuku.
U-Huygens wakhula isondo lokulinganisela kunye nentlanganiso yasentwasahlobo kwithuba elithile malunga ne-1675 kwaye ifunyenwe kwezinye iiristi zangoku. Olu phuculo lwavumela iwashi zangekhulu le-17 ukugcina ixesha ukuya kwemizuzu eyi-10 ngosuku.
UWilliam Clement waqala ukwakha iwashi kunye ne-"anchor" entsha okanye "ukuphumula" eLondon ngo-1671. Oku bekuphuculwe kakhulu kwinqanaba ngoba kungaphazamisekanga ukunyuswa kwe-pendulum.
Ngomnyaka we-1721, uGeorge Graham uphucule ukuchaneka kwexesha le-pendulum kwelinye lesibini ngosuku ngokuhlawulela utshintsho kubude be-pendulum ngenxa yobungakanani beqondo lokushisa. UJohn Harrison, umchweli kunye nokufundisa i-clockmaker, wahlenga iindlela zokubhalela ukushisa kwe-Graham kwaye wongezelela iindlela ezintsha zokunciphisa ukungqubuzana.
Ngowe-1761, wayekhe wakha i-chronometer yaselwandle kunye nesiphephelo sokusindiswa kwesondo elinesigxina esasiphumelele umvuzo we-1714 urhulumente waseBrithani onikezelwe ngenjongo yokumisela ubude ukuya kwisigidi se-degree. Wagcina ixesha elingaphakathi kwinqanawa ukuya kweyesihlanu kweyesibini ngosuku, phantse kunye newashi ye-pendulum yayingayenza kumhlaba, kwaye amaxesha angama-10 angcono kunokuba ayifunayo.
Ngaphezulu kwekhulu leminyaka ezayo, ukulungiswa kwakhokelela kwiwashi likaSiegmund Riefler kunye ne-pendulum ephantse yamahhala ngo-1889. Yafumana ukuchaneka kwekhulu lesibini ngosuku kwaye yaba ngumgangatho kwiimbonakalo ezininzi zeenkwenkwezi.
Umgaqo we-free-pendulum wangempela wenziwa nguRJ Rudd malunga ne-1898, ekhuthaza ukuphuhliswa kweeyure ezili-free-pendulum. Enye yezona zidumileyo, i-WH Shortt clock, yaboniswa ngo-1921.
Iwashi elifutshane elikhawuleza lithatha iwashi likaRiefler njengomlindi obalaseleyo kwiimbonakalo ezininzi. Lewashi yayinama-pendulum amabini, enye inceku kwaye enye inkosi. Ikhoboka lenkosikazi lanikela inkosi yalo i-pendulum iyancipha ityhutyana efunekayo ukuze igcine isichukumiso sayo, kwaye iqhube i-clock. Oku kuye kwavumela inkosi ukuba ihlale ikhululekile kwimisebenzi eyenza iphazamise ukuhlala kwayo.
Ieyunithi ze- quartz ze- crystal zatshintshwa iwashi elifutshane njenge-standard in the 1930s kunye no-1940, ukuphucula ukusebenza kwexesha elingaphezu kwee-pendulum kunye nokuphunyuka kwamavili.
Umsebenzi wee-Quartz i-clock isekelwe kwipropati ye-piezoelectric ye-crystal quartz. Xa inkundla yombane isetyenziswe kwi-crystal, iyatshintsha indlela yayo. Yenza inkundla yombane xa ityunyiwe okanye ifakwe. Xa kufakwe kwisiphaluka esifanelekileyo se-elektroniki, ukusebenzisana phakathi koxinzelelo lwe-mechanical kunye nombane wamandla kwenza ukuba i-crystal idumise kwaye ivelise isiganeko sombane esigxina rhoqo esingasetyenziselwa ukusebenzisa umboniso wewashi.
Ieyartz ii-clock clocks zazingcono ngenxa yokuba babengenayo iigesi okanye iindawo zokuphepha eziphazamise ukuhamba kwazo rhoqo. Nangona kunjalo, baxhomekeke ekutyikitheni komatshini ogxininise ukuxhomekeka ngokukodwa ngobungakanani bekristal kunye nesimo. Akukho kristali ezimbini ezinokuthi zichane ngokuchanekileyo ngokufanayo. Ieyartz iiwashi ziyaqhubeka zilawula iimarike kumanani ngenxa yokuba ukusebenza kwabo kukuhle kwaye bangabizi. Kodwa ukusebenza kwexesha kweeyure ze-quartz kuye kwagqithiswa kakhulu ngamawashi e-athomu.
Ulwazi kunye nemifanekiso eyenziwe yiSizwe soMgangatho weMigangatho kunye neThekhnoloji kunye neSebe lezoRhwebo lase-United States.
UkuBhaliswa kweSikolo kuMbandlululo waseMzantsi Afrika
Isiteji sokuKhanya kwexesha kwaye ngoku
Iifutshane ezimfutshane zeRed Riding Hood
Ngomhla weMeyi iMisebenzi kumaBakala 1-3
Kuphi Ukuma Xa u-bowling
UWilliam Jewell College Admissions
Iingoma eziphezulu ezi-10 zeePop About War
Yintoni i-Ethanol Fuel?